NDPSMỌD:: 18 ADORABLE NA MFE N'onwe Gị echiche na Mee N'onwe Gị - RLỌ EGO
NDMỌD:: 18 ADORABLE NA MFE N'onwe Gị echiche na Mee N'onwe Gị
NT BEKWU ND NA KWES BER NA NT AR NA-EGO NA-ECHI NA NT PRKWU ND PR ỌZỌ
Inwe ntu mara mma nke mara mma bụ ihe dị mkpa n'oge a. Ọ na-egosi na ị na-echebara ọdịdị gị echiche. Ma, anyị niile maara ka ọnụ ụlọ ịsa ahụ dị oke ọnụ dị, yabụ gịnị kpatara na ị gaghị ekepụta ọmarịcha atụmatụ gị na ndụmọdụ dị mfe m gosiri gị.
Ọ bụrụ na mbọ gị toro, egbula ya ọzọ ozugbo. Nwere ike iji ihe na-egbuke egbuke gel na-egbuke egbuke iji nye ha anya nke abụọ.
Ọ bụrụ na agbajiri ntu gị, ị nwere ike idozi ya na akwa mkpuchi nke gel gel na nylon bristles site na ncha ezé.
Iji nye mbọ gị ezigbo mma 3D, m na-egosi gị otu esi ese ha na-eji oji gel ojii wee kpoo ha n'okpuru ọkụ UV maka sekọnd 5. Ihe mkpuchi dị n’elu ga-esiwanye ike, mana ala ala ka ga-adị nro. Mgbe ahụ ị nwere ike ịkwanye ya na ngwa ntu iji nye ya oke obi ike nke ga-adị ka akwa a gbajiri agbaji. N'ikpeazụ, tinye ọlaedo ma ọ bụ ọlaọcha ọlaọcha n'elu ma ịmechaa. Ickpụcha mbọ aka gị zuru oke.
Ihe ọzọ ị nwere ike ịnwale bụ ịgbakwunye agba dị iche iche nke mbọ aka na efere jupụtara na mmiri wee jiri brush na-agbagharị ha gburugburu. Mgbe ị hụrụ nhazi nke ịchọrọ na ngwakọta ahụ, gbanye mbọ gị, wepụ ihe karịrị n'akụkụ, ma tinye uwe elu na-egbuke egbuke.
Lelee ruo na njedebe iji hụ nkuzi nkuzi m na ntu na-acha uhie uhie na mbọ aka nke mbọ mbọ.
0: 43 - 3D mbọ imewe
2: 24 - designtụnanya na ezigbo chinchi
4: 15 - mbọ aka na-enwu gbaa
6: 33 - Mara mma Zebra ntu
8:37 - Nkuzi nkuzi kpụ ọkụ n'ọnụ
9: 38 - Otu esi eji uzuzu holographic eme ihe
# mbọ # manicure #naildesigns
Ndi netwọria anyi:
NDPSMỌD:: CRAYY COOL Mee N'onwe Gị Ychọ ụlọ
SA C KOI SA ENKOR - egbula anyi (ya na SHOLA SHAYNA)
10 AKW BKWỌ A NA-ACHED AKW THATKWỌ NA-ECHE! - Ndepụta
Denye aha na nke 5 nke NWAANY cra nka. https://goo.gl/fWbJqz
Deba aha na 5-Minute Crafts KIDS: https://goo.gl/PEuLVt
Denye aha na 5-Nkeji Crafts MEN: http://bit.ly/2S69VUG
Ezi akụkụ nke Youtube: https://goo.gl/rQTJZz
Maka vidiyo ndị ọzọ na isiokwu gara: http://www.brightside.me
Egwu site na Olu Aria: https://www.epidemicsound.com/ .
Nke a pụtara na mbụ https://www.youtube.com/watch?v=vJDEemSFQ1s
*3d ntu ntuỌrụ 5 nkeji ogeacrylicMee N'onwe Gịmara mmaCrafts5 Nkeji Crafts
Isi mmalite: Madrid na-ama aka na Barca ga-abanye Lautaro
Von der Leyen kwetara mmejọ, gọnarị ọrụ maka mkparị nkwekọrịta nchekwa
AKKỌ: Jay-Z rụgidere Shakira na J Lo ka ha belata ...